Bizzabo: Simbisa Wako Mukati-Munhu uye Virtual Zviitiko pane Imwe Platform | Martech Zone
NeChishanu, Gumiguru 2, 2020 NeChishanu, Gumiguru 2, 2020 Douglas Karr
Bizzabo chiitiko chebudiriro chinopa timu yako zvese zvishandiso zvavanoda kuti vagadzire zviitiko zvinopa mubayiro vachitsvaga ruzivo rwekubatsira zviitiko zvako kukura munzira dzawaisambofunga kuti dzaikwanisika.
Bizzabo Chiitiko Platform Zvimiro
Bizzabo's-in-one chiitiko software inogonesa mu-munhu uye zviitiko zvechokwadi kuendesa zvakasarudzika zviitiko zvevanoenda kuburikidza nehungwaru uye nechinangwa-chakavakirwa pamunhu kuita.
Chiitiko Kunyoresa - rongedza zvizere mushanyi wako kuenda kune chiitiko chemafomu akafumiswa uye anoshamisa, akawanda matiketi mhando.
Website Website - gadzira yakashongedzwa yechiitiko webhusaiti ine yakasimba mhariri inosanganiswa zvizere neako chiitiko kunyoresa software uye chiitiko chiitiko.
Kurukura - Tumira email kukoka uye yekushambadzira mishandirapamwe inotyaira kufarira uye kunyoreswa nerubatsiro rwezvakagadzirwa zvemukati.
Batanidzwa - Push notices, one-on-one network, inofambidzana ajenda, uye mhenyu kuvhota zvese zvinoshanda pamwechete kuchengetedza avo varipo vachiita-vese mukati nekunze kwechiitiko chechiitiko.
Kuita mari - Ipa vatsigiri vako mikana yakasarudzika, inosanganisira tsika yekupaza masikirini, zvipo zvakakosha, otomatiki kusundira ziviso mhere-kunze, makambani ekutsigira, uye data rekuyera nenzira kwayo vanotsigira ROI.
ripoti - Kuzivisa kwakadzika kunoita kuti zvive nyore kuchikwata chako kuti chinzwisise mashandiro anoita zviitiko zvichienzaniswa nemabhenji. Gadza zvinangwa, tarisa mari uye kubatanidzwa, uye nezvimwe.
Bizzabo inobatsira makambani kuyera, kubata, uye kuyera zviitiko kumabhizimusi akakosha - kupa simba murongi wese, mushambadzi, muratidziri, uye anopinda kuburitsa simba rezviitiko zvehunyanzvi.
Zviitiko Virtual zveBizzabo
Bizzabo inobatsira makambani kuwana izere mukana wevateereri kusangana nezviitiko zviri (zvishoma) zvine hunyanzvi sezviitiko zve-zvemunhu, chero kune varipo. Nemhinduro yavo yekupedzisira-kumagumo, iwe unokwanisa kuendesa yepamusoro-soro nhepfenyuro uye pane-anoda mavhidhiyo pachiyero ine bhizinesi-giredhi mhinduro. Zvimiro zvinosanganisira:
Rarama rarama zviitiko zvese kana zvikamu zvakanangana nevateereri vepasirese chero saizi ine inotungamira vhidhiyo chikuva, inofambiswa ne Kaltura.
Yakavakwa nematanho epamusoro ekuchengetedzeka uye zvakavanzika zviyero kuti uve nechokwadi chekuti data rako rakachengetedzwa uye rinoteerera kumitemo.
Wedzera mari yemubhadharo ne-yevhidhiyo kushambadzira kune yekutsigira kuiswa mune yako chiitiko.
Wedzera mhinduro chaiyo yaBizzabo uye batanidza kumavhidhiyo matekinoroji esarudzo yako.
Bizzabo Inopawo Virtual Production Services
Bizzabo's Virtual Production Services timu inopa kumagumo-kumagumo chaiwo uye masevhisi masevhisi anosanganisira kugadzirwa kuzere, odhiyo uye anoonekwa, dhizaini, kuitisa, uye zvimwe.
Kubva kugadzirira maspika uye mamoderita kune nhepfenyuro dzakaburitswa zvakanyanya, Bizzabo inopa akawanda masevhisi kuti akwane zvaunoda zvechiitiko.
Bizzabo inopa masimba zviitiko zvemhando dzakadai seForbes, HubspotINBOUND, Dow Jones, Gainight, uye zvimwe zvakawanda. Iyo kambani yakavambwa naBoaz Katz, Alon Alroy, naEran Ben-Shushan, uye ine vashandi vanopfuura zana muhofisi dzeNew York neTel-Aviv.
Tags: bizzabomusangano wepurogiramumusangano wekushambadzirapasocial network
Webhusaiti Zvimiro Rondedzero: Iyo 67 Yekupedzisira Inofanirwa-Haves Yako Saiti